रुसी र अमेरिकी कूटनीतिज्ञ बीच जेनेभामा गोप्य वार्ता
जेनेभा । रुसी र अमेरिकी कूटनीतिज्ञले बिहीबार जेनेभामा गोप्य वार्ता गरेका छन् । अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन र रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनको बीचमा जुनको शिखर सम्मेलनको वार्तापछि विश्वका आणविक शक्तिराष्ट्र बीचको यो पछिल्लो चरणको छलफल हो।
इक्वेडरको एक कारागारमा कैदीहरुबीच डरलाग्दो झडप, २४ जनाको मृत्यु, ४२ जना घाइते
एजेन्सी । इक्वेडरको एक कारागारमा भएको झडपमा परेर मृत्यु हुने कैदीहरुको संख्या कम्तीमा पनि ३० पुगेको छ । बुधबार यहाँका कैदीमध्ये ३० जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ । यसअघि २४ जनाको मृत्यु भएको र अरु ४२ जना घाइते भएका बताइएको थियो । मंगलबार भएको सो झडपमा परेर मृत्यु हुनेको संख्या बुधबार ३० पुगेको र घाइतेहरु ५२ जना पुगेको बताइएको छ ।
भारतलाई तालिवानले गर्यो यस्तो आग्रह
एजेन्सी । अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले अफगानिस्तान र भारतका बीचमा भइ आएको हवाई उडानलाई सुचारु गर्न भारत सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।तालिबान सरकारका एकजना अधिकारीले भारत सरकारलाई पत्र लेखेर यसअघिका सबै खालका हवाई उडानहरु सुचारु गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।
रुसी र टर्कीस राष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता, सिरियाबारे कुराकानी
एजेन्सी । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र टर्कीस् राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्डोगानबीच भेटवार्ता भएको छ । उनीहरुले पछिल्ला वर्षहरुमा रुस र टर्कीले गरेका सहकार्यहरुका बारेमा कुराकानी भएको बताइएको छ ।
'खोप लगाएका पर्यटकले आगमनका लागि पीसीआर परीक्षण गर्नु पर्ने छैन'
एजेन्सी । श्रीलङ्काका स्वास्थ्य मन्त्री कहेल्या रामबुकवेलाले बन्दरानाइके अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएर भित्रिने पर्यटकका लागि यसपहिले अनिवार्य गरेको पीसीआर परीक्षणसम्बन्धी प्रावधानलाई हटाउने निर्णय गरेको छ ।
अमेरिकामा कोरोनाका कारण एकैदिन २०२६ जनाको मृत्यु
एजेन्सी । अमेरिकामा कोरोनाका कारण एकैदिन २०२६ जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै अमेरिकामा कोरोनाका कारण हालसम्म सात लाख १३ हजारभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ ।
जापानमा को बन्दैछ नयाँ प्रधानमन्त्री ?
एजेन्सी । जापानको सत्तारुढ दलको नयाँ अध्यक्षका रुपमा फुमिओ किशिडा निर्वाचित भएका छन् । लिवरल डेमोक्रयाटिक पार्टी (एलडीपी)को निर्वाचन समितिले बुधबार उनलाई निर्वाचित भएको घोषणा गरेको हो ।
जापानमा शक्तिशाली भूकम्प गयाे
एजेन्सी । जापानमा बुधबार शक्तिशाली भूकम्प आएको छ । जापान भूगर्भ विभागले दिएको जानकारी अनुसार ६.१ म्याग्नीच्युडको भूकम्प आएको हो ।
अब काँग्रेसको भए कमरेड कन्हैया कुमार !
एजेन्सी । भारतको काँग्रेस पार्टीमा युवा नेता कन्हैया कुमार प्रवेश गरेका छन् । सिपिआईका नेता कन्हैयाले अन्ततः कम्युनिष्ट पार्टी छोड्दै काँग्रेस पार्टी प्रवेश गरेका हुन् । भारतीय जनता पार्टीको कडा आलोचना गर्दै आइरहेका उनले अन्ततः काँग्रेस पार्टीमा प्रवेश गरेका हुन् । यसअघि उनले सिपिआईमार्फत बेगुसराईबाट निर्वाचन लडेका थिए । तर, विजेपीका उम्मेदवारसँग पराजित भएका थिए ।
यी हुन् हालसम्म भेरोसेल लगाएको प्रमाणलाई खोप प्रमाणको रुपमा स्वीकार गर्ने देशहरु
एजेन्सी । पछिल्लो समय कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिनलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी हुँदै आइरहेको छ । कतिपय देशमा लगाइरहेको भ्याक्सिनलाई केही देशले खोप प्रमाणको रुपमा स्वीकार नगरेको अवस्था रहेको छ ।